रवि लामिछानेको पक्षमा उर्लिनेहरुलाई नायिका करिश्मा मानन्धरले दिइन ‘भेडाहरु’को संज्ञा !-Nepali online news portal
न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रबि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् ।
आफ्ना पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा लामिछानेसहित तीन जनाको नाम मुछिएपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । लामिछानेसहित तीन जनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले हिजो शुक्रबार आदेश दिएको छ ।
चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले भने रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गज्जबको पोष्ट गरेकी छिन् । उनले आफ्नो पोष्टमा लेखेकी छिन्, “राज्यको तवरबाट हुनुपर्ने कामकाज निजीतरबाट हुनु खतरानाक हुन्छ । नत्र किन चाहियो पार्लियामेन्ट, कन्स्टिच्यूसन, राज्य संयन्त्र ? यत्रो तिरो तिरिरहेका छौं । तपाईहरुले नैतिकता नगुमाएको भए यो समस्या आउने नै थिएन । अब गंगाले हात धुनेले आँट गरे । पहिल्यै भनेको थिएँ यस्तो स्वतन्त्रताले अराजकता निम्त्याउँछ । सानो देशको व्यवस्था र सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने कस्तो सरकार ? अब भोग्नुस भेडाहरुको कोलाहल । सत्य तितो हुन्छ ।”
तर, आज शनिबार चितवनमा अर्को रमाईलो दृश्यपनि देखियो । पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा निश्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र युवा समूहको जुलुश निस्किएको थियो । तीनै जनालाई आत्महत्या दुरुत्साहनको अनुसन्धान सिलसिलामा प्रहरीले पक्राउ हो ।
पुडासैनीले चितवनको कंगारु होटलमा साउन २० गते आत्महत्या गरेका थिए। पुडासैनीले भिडियोमा लामिछानेले आत्महत्याका लागि बाध्य पारेको बताएका थिए।